Izinto ezizenzekelayo kwivenkile ekwi-Intanethi-iGeofumadas
Matshi, 2018 Ezahlukeneyo
Ngoko ke unomnini oqhoshayo weChrysler? Luhlobo luni lweChrysler lenu? Ngaba i-Voyager, i-300, i-Neon, i-PT Cruiser, iMbono, iViper, i-Sebring, i-Crossfire okanye iCaravan enkulu? Zonke iimoto ze-brand brand yase-American Chrysler ziyingqayizivele kwaye zinikeza ubuhlobo obuhle phakathi komgangatho kunye nexabiso. Ukongezelela, inkampani isebenzisa isakhiwo esithile esingaphandle esaziwa njenge-cabin ejongene nebheke phambili. Le khabhinethi ekhethekileyo iphakanyiselwe kwi-hood kunye nenjongo yayo kukuthabatha ingqalelo yethu. Kodwa akukhona nje ukubonakala kwangaphandle esikuthandayo. I-Chrysler ithetha ukhuseleko nokuthembeka. Kodwa ngenxa yoko, imoto yakho ethandekayo kufuneka ibe yimeko epheleleyo.
Iworkshop inokunyamekela oku. Okanye unokuzenza ngokwakho. Ngenxa yoko, udinga isitolo esithembekileyo kwi-intanethi ukukunceda ngale ngxaki. Isitoreji se-intanethi ye-repestosauto.es inikeza uluhlu olubanzi lweempawu zeemoto, kuquka uCrysler. Apha uya kufumana izinto ezifanelekileyo eziya kuhambelana nawe Chrysler; kungakhathaliseki ukuba ukhangele ntoni, uya kuhanjiswa: iinkqubo zomoya, ukuxinwa kweexike, amabhanti okuhambisa, izixhobo, izixhobo zokuwaphula, izixhobo, izixhobo zombane, iinjine, iinkqubo zokukhupha, iifayile, ii-fuel systems, ama-heaters, i-cooling systems, i-hoses kunye nemibhobho, iinkqubo zokuqala, izixhobo zangaphakathi, izikhokelo, ukumiswa, kunye neenkqubo zokucoca i-windshield kunye nokunye okuninzi.
Kutheni u sa tha ndabuza? Jonga ngokwakho ngokujonga iinqununu zomgangatho kwixabiso elithengiweyo repestosauto.es.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Wamkelekile kwixesha lokubonisa
Post Next I-Bentley Systems 'yoNyaka kwiNgqungquthela yokuPhulwa kweNkcazo kunye neMigangatho iya kubanjelwa eLondonOkulandelayo »